UGottfried Wilhelm Leibniz: i-biography kanye nokusebenza kwesayensi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kule bhulogi sihlala sikhuluma ngososayensi ababaluleke kakhulu neminikelo yabo emhlabeni wesayensi. Kodwa-ke, izazi zefilosofi nazo zenze iminikelo eminingi efana ne- Leibniz. Uyisazi sefilosofi ogama lakhe eliphelele nguGottfried Wilhelm Leibniz futhi wayebuye abe yisazi sefiziksi nesazi sezibalo. Kwakunethonya elibalulekile ekuthuthukisweni kwesayensi yanamuhla. Ngaphezu kwalokho, ungomunye wabamele inkambiso yobuciko besimanjemanje kusukela ulwazi lwakhe lwezibalo kanye ne-physics lwasetshenziselwa ukuchaza izinto ezithile zemvelo nezabantu.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukuze sikutshele konke odinga ukukwazi nge-biography ka-Leibniz nokwenza kwakhe.
1 I-Leibniz Biography
2 Izenzo neminikelo kaLeibniz
3 Izibalo ezingapheli kwimathematics
5 Ifilosofi kaLeibniz
Wazalwa ngoJulayi 1, 1646 eLeipzig, eJalimane. Wakhulela emndenini ozinikele wamaLuthela ngasekupheleni kwempi yeminyaka engama-30. Le mpi yayishiye izwe lonke lingamanxiwa. Kusukela esemncane, noma nini lapho efunda isikole, ubelokhu eluhlobo lokuzifundisa selokhu akwazi ukufunda izinto eziningi eyedwa. Lapho eneminyaka eyi-12, uLeibniz wayesevele wafunda ulimi lwesiLatini eyedwa. Futhi, ngangifunda isiGreki ngasikhathi sinye. Ikhono lokufunda laliphezulu kakhulu.
Kakade ngo-1661 waqala ukuqeqesha emkhakheni wezomthetho e-University of Leipzig lapho ayenesithakazelo esikhulu emadodeni ayekade enenkanyezi ekuvukeleni kokuqala kwesayensi nefilosofi eYurophu yanamuhla. Phakathi kwalawa madoda ayeguqule uhlelo lonke kwakukhona UGalileo, uFrancis Bacon, uRené Descartes noThomas Hobbes. Phakathi kwemicabango yamanje eyayikhona ngaleso sikhathi ezinye izifundiswa neminye imicabango ka-Aristotle yatholwa.
Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe zobumeli, wachitha iminyaka eminingana eParis. Lapha waqala ukuqeqesha ngezibalo kanye ne-physics. Ngaphezu kwalokho, wakwazi ukuhlangana nezazi zefilosofi kanye nezibalo ezaziwa kakhulu ngaleso sikhathi futhi wafunda ngokuningiliziwe bonke labo ababemthanda. Waqeqeshwa noChristian Huygens owayeyinsika eyisisekelo ukuze kamuva athuthukise ithiyori kumibalo ehlukanisayo nehlanganisiwe.
Wahamba ezindaweni ezahlukahlukene zase-Europe ehlangana nezinye zezazi zefilosofi ezazimele kakhulu ngalesi sikhathi. Ngemuva kwalolu hambo oluya eYurophu wasungula i-academy yesayensi eBerlin. Lesi sikhungo sasineziqu eziningi zabafundi ababefuna ukwazi kabanzi ngesayensi. Iminyaka yokugcina yempilo yakhe wayichitha ezama ukuhlanganisa izinkulumo ezinkulu zefilosofi yakhe. Noma kunjalo, le nhloso ayikwazanga ukuphumelela. Ushonele eHanover ngoNovemba 1716.
Izenzo neminikelo kaLeibniz
Sizobona ukuthi bekuyiziphi izimo eziphambili nezimo eziphambili zeLeibniz emhlabeni wesayensi nefilosofi. Njengakwamanye amafilosofi nososayensi bangaleso sikhathi, ILeibniz ekhethekile ezindaweni ezahlukahlukene. Kumele sikhumbule ukuthi ngalezi zikhathi bekungekho lwazi oluningi ngayo yonke imikhakha, ngakho-ke umuntu oyedwa angaba nguchwepheshe ezindaweni eziningi. Njengamanje, kufanele ubhekise endaweni eyodwa kuphela futhi ngakho-ke kunzima ukwazi yonke imininingwane ngaleyo ndawo. Futhi iqiniso ukuthi inani lemininingwane elikhona nokuthi yini engaqhubeka nokuphenywa maqondana nalokho okwakukhona phambilini kunomehluko ongathandeki.
Amandla ochwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene amvumela ukuthi akhe imibono ehlukene futhi abeke izisekelo zokuthuthuka kwesayensi kwanamuhla. Ezinye zezibonelo zazisezibalo nasemqondweni kanye nefilosofi. Sizohlukanisa iminikelo yabo eyinhloko:
Izibalo ezingapheli kwimathematics
Kanye no-Isaac Newton, uLeibniz waziwa njengomunye wabadali bezibalo. Ukusetshenziswa kokuqala kwe-calculus ebalulekile kubikwa ngonyaka we-1675 no Bengizoyisebenzisa ukuthola indawo engaphansi komsebenzi Y = X. Ngale ndlela, kuyenzeka ukuthi kukhiqizwe izincazelo ezithile ezifana nomjikelezo ohlanganisiwe S futhi kwaveza umthetho kaLeibniz, okuyiyona mithetho yomkhiqizo wezibalo ezihlukanisiwe. Uphinde wanikela encazelweni yezinhlaka ezahlukahlukene zezibalo esizibiza ngokuthi ama-infinitesimals nokuchaza zonke izakhiwo zawo ze-algebraic. Okwamanje bekunezindida eziningi obekumele zibuyekezwe futhi zilungiswe kamuva ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye.
Unikele ngesisekelo se-epistemology kanye ne-modal logic. Wayethembekile ekuqeqeshweni kwakhe kwezibalo futhi wakwazi ukuphikisa kahle ukuthi ubunzima bokucabanga komuntu bungahunyushelwa olimini lwezibalo. Lapho nje lezi zibalo sezizwisisiwe, kungaba yisixazululo sokuxazulula ukungafani kwemibono nezimpikiswano phakathi kwabantu. Ngenxa yalesi sizathu, waziwa njengomunye wochwepheshe abaphambili besikhathi sakhe, kusukela ku-Aristotle.
Phakathi kokunye, ukwazile ukuchaza izakhiwo nendlela yezinsizakusebenza ezahlukahlukene zezilimi ezinjengokuhlangana, ukunganakwa, isethi, ukufakwa, ubunikazi nokusetha okungenalutho, nokuhlangana. Konke obekulusizo ukuqonda nokwenza izingqinamba nokuhloniphana okuvumelekile komunye nomunye okungavumelekile. Konke lokhu kungesinye sezigaba ezisemqoka zokuthuthukiswa komqondo wesifo somqondo kanye nomqondo wezindlela.
Ifilosofi kaLeibniz ifingqwe ngomgomo wokwenza umuntu ngamunye. Kwenziwa ngawo-1660s futhi kuvikela ubukhona benani lomuntu ngamunye elakha lonke ngokwalo. Lokhu kunjalo ngoba kungenzeka ukuthi uhlukanise kusuka kusethi. Le kwakuyindlela yokuqala yokuqhamuka kombono wamaJalimane wamakhosi. Kuyinto yokufanisa ne-physics lapho kuphikiswa khona ukuthi amakhosi angumbuso wengqondo ukuthi yini ama-athomu asendaweni ebonakalayo. Yizinto zokugcina zomhlaba wonke futhi yini enikeza ukwakheka okukhulu ekutholakaleni kwezakhiwo ezinjengalezi ezilandelayo: izinduna zingunaphakade ngoba aziboli zibe ezinye izinhlayiya ezilula, zingabantu ngabodwana, ziyasebenza futhi zingaphansi kwemithetho yazo.
Konke lokhu kushiwo njengoba ukumelwa ngakunye kwendawo yonke uqobo.
Njengoba ukwazi ukubona, uLeibniz wenze amagalelo amaningi emhlabeni wesayensi nefilosofi. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLeibniz ku-biography yakhe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-Leibniz Biography